पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाए « Artha Path
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाए
काठमाण्डौं । बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश अम्मरराज पौडलको इजलासले महरालाई सफाइ दिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वसभामुख महरालाई संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा अन्तिम सुनुवाइ गरे पनि ४ फागुनमा फैसला सुनाएको थिएन । मुख्य न्यायाधीश अम्मरराज पौडलको इजलासमा ४ फागुनमा बहस सकिए पनि समय अभाव देखाउँदै मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखिएको थियो ।
अन्तिम बहसमा महराको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, अधिवक्ता डा। दिनमणी पोखरेल, अधिवक्ता सुशील सापकोटा र अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले बहस गरेका थिए ।
२६ माघमा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि सुनुवाइ शुरू भएको थियो । सरकारी वकील कार्यालयका तर्फबाट भने यसअघि नै बहस सकिएको थियो ।
सरकारी वकील कार्यालयको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता बिनिता कपालीले बहस गरेका थिए ।
१२ असोजमा संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महराले १४ असोजमा राजीनामा दिएका थिए ।
१९ असोज साँझ महराविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। उनी सोही दिन पक्राउ परेका थिए ।
महराविरुद्ध १४ कात्तिकमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध महरा पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालतले ३ पुसमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। साथै, उच्चको आदेशमा एक महीनाभित्रमा मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन भनिएको थियो ।
महराविरुद्ध जबरजस्ती करणी प्रयासमा पाँच वर्ष र सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा कसुर गरेको भन्दै थप साढे दुई वर्ष गरी साढे सात वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबी थियो ।
अर्थमन्त्रीले बोर्ड अध्यक्षलाई बजार प्रभावित गर्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएपछि मंगलबार नेप्सेमा हरियाली छायो
काठमाडौं । निरन्तर ओरालो लागेको नेप्सेले पुन आफ्नै लयमा फर्किएको छ । धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त
फेरी बढ्यो सुन, तोलामा कति ?
काठमाडौं । आज मंगलबार एकैदिन सुन तोलामा ६ सयले बढेको छ । आज लगातार दोस्रो
कोभिडको खोप ल्याउन कुटनितिज्ञ स्तरबाट पहल थाल्न अध्यक्ष ढकालद्वारा परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रि रघुबीर
यसअघि स्थगित गरिएका सम्पूर्ण सेवा मङ्गलबारबाट नियमित रूपमा सञ्चालन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि स्थगित गरिएका सम्पूर्ण सेवा मङ्गलबारबाट नियमित